एउटा नाबालक टुहुरो हुन बाट बचाउन र एक श्रीमतीको सिन्दुरको रक्षा गर्न, सक्दो सेयर गरौं, तपाईहरुको सहयोगले कसैको भलो हुन सक्छ – नेपाली सूर्य
एउटा नाबालक टुहुरो हुन बाट बचाउन र एक श्रीमतीको सिन्दुरको रक्षा गर्न, सक्दो सेयर गरौं, तपाईहरुको सहयोगले कसैको भलो हुन सक्छ
November 6, 2017 November 6, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on एउटा नाबालक टुहुरो हुन बाट बचाउन र एक श्रीमतीको सिन्दुरको रक्षा गर्न, सक्दो सेयर गरौं, तपाईहरुको सहयोगले कसैको भलो हुन सक्छ
हार्दिक अपिल ! आज हामी बिरामी सवीन कुमार श्रेष्ठलाई भेट्न सुस्मा कोइराला अस्पतालमा गएका थियौं । उहाँ २८ बर्षको हुनुहुन्छ । वहाँको एकवर्ष अगाडि मिर्गी रोगका कारण भर्याङ्ग बाट चिप्लिएर लड्न गई मेरुदण्डको हाड भाँचिएर प्यारालाईसेस भएको रहेछ । अोच्छ्यानमा सुतिराख्नु पर्ने हुँदा सुत्दा सुत्दै शरिरका विभिन्न भागहरूमा तिन ओटा घाउहरू भएका थिए । दुइवटा घाउ चाहिँ4डिग्री ( हाड नै देखिने गरि ) पुगिसकेका छन् ।
उहाको घरपरिवारको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएकोले उहाँलाई उपचार गराउन सुस्मा कोइराला अस्पताल ल्याईएको रहेछ । हामी त्यहाँ पुग्नासाथ उहाँको ५०/५१ बर्षको बुवा असाध्यै रुन थाल्नुभयो जसरी पनि मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस् बाबुहरू भनेर , हामीलाई साह्रै दु: ख महशुस भयो हामीले उहाँलाई जे जति हुन्छ आफूले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । त्यसमाथि उहाँको अस्ति भर्खरै बिहे गरेर ८ महिनाको नानी पनि छ । वहाँको जिन्दगीसँग तीनजनाको जिन्दगी जोडिएको छ , वहाँलाई बचाउनु भनेको उहाँको नानीलाई बाबाको कमी हुन नदिनु हो , अनि उहाँको श्रीमतीको सिउँदोको सिन्दुरको रक्षा गर्नु हो ।
त्यसैले कृपया मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो सेवा हो । आ_आफ्नो ठाउँबाट के कसरी हुन्छ जे जति भएपनि सहयोग गरिदिनु होला । यहाँहरूको सानो सहयोगको कारण एउटा नाबालक टुहुरो हुन बाट बच्नेछिन् भने वहाँको श्रीमतीको सिन्दुरको रक्षा हुनेछ ।
सहयोग गर्न इच्छुक महानुभाव हरूले निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । निम्न बैंक खातामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।
सहयोग को लागि सम्पर्क: कृष्ण खड्का :- ९८१८४३६०७८ प्रकाश घिमिरे :- ९८१८७५८२०४/९८४०३२९९८० (रेड ब्रो) Bank account details: bank a/c no. 00615080433 Prakash Ghimire Siddhartha bank limited Tripureshor Branch धन्यवाद ।
Source : eallnepal
पोखरामा यस्तो पनि हस्पिटल यि सुत्केरीको मृत्यू भएको ७ दिनसम्म बेहोस भएको भन्दै पैसा अशुलीरह्यो ! #Rip
बुटवलको हस्पिटललाइन मा ट्रिपरले २ वटा कार र २ वटा मोटरसाइकल लाई ठक्कर दियो ! थप विवरण…
March 8, 2019 March 8, 2019 Nepali Surya
छोरा जन्माउने लाई ३ हजार र छोरी जन्माउने लाई ५ हजार दरले पोषण भत्ता वितरण